Scout UAG, mpamatsy tonga lafatra ny Smart Keyboard Folio | Vaovao IPhone
Scout UAG, famenon-javatra tonga lafatra amin'ny Smart Keyboard Folio anao
Luis Padilla | | iPad Pro, maro
Ny iPad Pro miaraka amin'ny Apple Pencil sy Apple's Smart Keyboard Folio dia mamorona andiany boribory, saingy misy zavatra mampiahiahy ireo mpampiasa azy: ny fiarovana ratsy natolotry ny raharaha Apple. UAG Scout dia tonga hamaha io olana io ary manao izany amin'ny fomba mahafinaritra.
Ny fonony kitendry Apple, Smart Keyboard Folio, dia manana famolavolana tena mahavariana, miaraka amin'ny fahamendrehana sy hazavana mihoapampana izay mahatonga ny sarotra hieritreritra fa azo ampidirina ao anaty fonony ny fitendry keyboard. Tsy mila fifandraisana Bluetooth na batterie anatiny noho ny Smart Connector izay manome azy ny mety ho "Plug & Play" Raha tsy mila manamboatra na inona na inona ao amin'ny fikirakiran'ny fitaovantsika dia misy ny tanjany lehibe hafa rehefa manapa-kevitra momba azy na maodely iray hafa. Na izany aza, manana teboka malemy izy: tsy voaaro ny fiarovana ny fitaovana.
iPad Pro miaraka amin'ny Smart Keyboard Folio
Ny endriny minimalista dia mampiharihary tanteraka ireo zana-kazo an'ny iPad Pro, izay mahatonga ny fahalavoana amin'ny tany mora tohina mivantana amin'ny endriny alimina ao amin'ny takelaka sarobidy misy antsika, manimba tanteraka. Ity dia zavatra iray izay nahatonga ny mpampiasa maro hanadino ireo toetra tsara nananany, nisafidy tranga hafa izay ratsy kokoa amin'ny lafiny hafa nefa manome fiarovana bebe kokoa. UAG (Urban Armor Gear) dia manolotra safidy hafa ahafahantsika mampiasa ireo zavatra lehibe rehetra momba ny Smart Keyboard Folio, ary arovy koa ny iPad Pro.
Ity no tranga Scout UAG ho an'ny iPad Pro, azo alaina ho an'ny maodely iPad Pro rehetra misy fifandraisana USB-C, izany hoe hatramin'ny taona 2018, ary mifanaraka amin'ny Smart Keyboard Folio ihany, tsy miaraka amin'ny Magic Keyboard izay mampiditra trackpad. Vita amin'ny polyurethane thermoplastic, UAG dia mahatratra tranga maivana izay miaro ny iPad Pro + Smart Keyboard Folio napetraka miaraka amin'ny hateviny farafahakeliny, ary mamela anao hanohy hampiasa ny fonosam-bokatra Apple fa tsy ho very ny fananana rehetra.
Izy io dia tranga iray mitovy amin'ny fonony aoriana ho an'ny iPad, tsy misy fonony eo aloha, ary misy ny lavaka ilaina rehetra ho an'ny mpandahateny, mpampitohy, mikrôfona, sns. Mazava ho azy fa afaka manohy mampiasa ny bokotra ara-batana rehetra ao amin'ny terminal ianao (volume sy hery) ary Izy io koa dia manana emit manokana natokana ho an'ny Apple Pencil, izay mbola azo apetraka ao amin'ny toerany, fa ankehitriny dia tsy hiharan-doza amin'ny fianjerana amin'ny tany ianao amin'izay kapoka kely fotsiny. Ny lanjany dia 198 grama, izay tsy olana amin'ny fampiharana raha toa ka manadinika izay omeny antsika isika.
Ny tranga UAG Scout dia manana ny mampiavaka azy ampiasaina miaraka amin'ny Smart Keyboard Folio, ary izany ny ampahatelony ambany dia manana "hinge" ahafahantsika maka tahaka ny fihetsiky ny fonony fitendry, mba hahafahantsika mametraka ny iPad Pro ao amin'ny ireo toerana roa avelan'ny Apple case hampiasa kitendry na hankafizantsika ny atiny multimedia. Ny akanjo namboarin'i UAG dia tena tsara tokoa Ary tsy voatery hanery ny hetsika ianao na hanao zavatra hafahafa hanokafana ny iPad, ny hetsika rehetra dia voajanahary toy ny teo aloha.
Ny zavatra iray tena tiako indrindra amin'ity tranga ity dia ny fomba "mikatona" ny iPad miaraka amin'ny fonony ny folio Smart Keyboard. Mifanaraka tsara ny zava-drehetra ary ny volavola dia refesina amin'ny milimetatra mba tsy hisy banga na fanitsiana ratsy. Ny tranga Scout UAG dia toa singa iray hafa amin'ny tranga iPad, toa tsy fanampin-javatra nampiana ho an'ny napetraka izy io. Ny fanesorana ny iPad Pro amin'ireo tranga roa hitazomana ny takelaka eo am-pelatanana dia mora, na dia eto aza ianao dia tsy maintsy mandresy takelaka roa izay tsy maintsy mifanaraka tsara ny raharaha. Tsy olana lehibe io fa iray segondra fotsiny amin'ny fotoanao.
Ny fanamarinana ara-tafika ny raharaha Scout UAG (810G-516.6) dia fiadanan-tsaina rehefa tonga amin'ny fahalalana fa ho voaro tsara ny iPad-nao. Tsy olana amin'ny fitsapana ny fanamarinana raha toa ka manatanteraka izay ampanantenainy, fa ny fahalalana ny làlan'ny UAG, Raha latsaka amin'ny tany ny iPad misy an'ity raharaha ity dia azo antoka fa hihazona ny fofonainao ianao fa tsy hitomany.
1 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Raha tianao ny Apple's Smart Keyboard Folio nefa manahy momba ny tsy fahombiazan'ny fiarovana azy, ity tranga avy any UAG ity no notadiavinao. Fanomezana ny hateviny sy ny lanjany (tsy azo ihodivirana) Manolotra anao fiarovana amin'ny fanamarinana ara-tafika sy izany rehetra izany nefa tsy very ny tombony rehetra amin'ny fonony fitendry Apple, izay azonao atao ny manohy mampiasa nefa tsy mahatsikaritra zavatra hafa. Manolotra fanampiana ho an'ny Apple Pencil koa izy, teboka iray izay tsy omena lanja loatra nefa ankasitrahana rehefa manana izany ianao. Azo alaina amin'ny maodely iPad Pro 2018 sy 2020, ity maodely voadinika ity dia ny iPad Pro 12,9 "2018 manokana ary misy vidiny € 54,95 amin'ny Amazon (rohy). Etsy an-danin'izany, antsipiriany lehibe: ny maodely 2020 dia miasa ihany koa ho an'ireo 2018.
UAG Scout iPad Pro 2018 11 "€ 44,95 ao Amazon (rohy)
UAG Scout iPad Pro 2018 12,9 "€ 54,95 ao Amazon (rohy)
UAG Scout iPad Pro 2020 11 "€ 44,99 ao Amazon (rohy)
UAG Scout iPad Pro 2020 12,9 "€ 54,45 ao Amazon (rohy)
€44,95 a €54,95
Famerenana ny: Luis Padilla
100% mifanaraka amin'ny Smart Keyboard Folio
Mitombo ny hateviny
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Scout UAG, famenon-javatra tonga lafatra amin'ny Smart Keyboard Folio anao
Costa Misteriosa, ilay lalao tsy mitombina apetrak'i Apple eo amin'ny pejy voalohany
Patanty hametrahana ny Apple Pencil ao amin'ny raharaha iPad